नेपालमा कहाँ–कहाँ पहिरोको खतरा ? | Ratopati
नेपालमा कहाँ–कहाँ पहिरोको खतरा ?
personशम्भु दंगाल exploreकाठमाडौं access_timeअसार २८, २०७५ chat_bubble_outline0
सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या समाधानका लागि अध्ययन : भारतीय पक्ष सकारात्मक
भारतले बनाएको बाँधका कारण मनसुनमा डुबानग्रस्त हुँदै आएको तराईका विभिन्न स्थानमा दुई देशको संयुक्त अवलोकनका क्रममा भारतीय पक्षले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा समाधानको पहल गर्ने बताएको छ । नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई जोखिमयुक्त स्थान देखाएर त्यसको सुधार गर्न सुझाव दिएको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपसचिव अरविन्दकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
गत असार १२ गतेदेखि १६ गतेसम्म नेपाल भारत संयुक्त समितिले मेचीदेखि पर्सासम्म बाढीको सम्भावित जोखिम क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । नेपालबाट जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक प्रदीप थापाको नेतृत्वको ५ सदस्य र भारतका तर्फबाट गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोजका प्रमुख अजयकुमार नेतृत्वको ५ सदस्य टोलीले मेचीदेखि पर्सासम्मका ७ नदी क्षेत्रको अवलोकन गरेको थियो ।
वर्षायाममा हरेक वर्ष नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँधका कारण डुबान हुँदै आएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला दुई देशको संयुक्त प्रतिनिधिले यसबारे अध्ययन गरिदिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपाल भारत डुबान व्यवस्थापन संयुक्त समितिले सप्तरीको तिलाठी र भारतको कुनौलीमा बग्ने खाँडो नदीको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो । खाँडो नदीमा भारतले बाँध बनाएका कारण नेपाल तर्फको भूमिमा बाढी पस्ने गरेको छ, यसका कारण दुई देशका स्थानीयहरूबीच बेलाबेला झगडासमेत हुने गरेको छ । संयुक्त समितिले खाँडो नदीमा मिसिने जेटा नदीलाई अर्कोतिर फर्काउने हो भने समस्या नहुने सम्भावित समाधानका रूपमा लिएको छ ।
यस्तै सिरहाको कमला नदीमा आउने बाढीले नेपालको इनरवा र भारतको जयनगरमा आउने बाढीका बारेमा पनि संयुक्त टोलीले अध्ययन गरेको छ । भारतले बाँधेको बाँधका कारण नेपालको ठूलो भाग डुबानमा पर्दै आएको छ ।
सो टोलीले मैनावती तथा गगन नदी, लाङ्दी गोठ, सिरहा नगरपालिका वडा नं. २१ क्षेत्रको अवलोकन र स्थानीयसँग बाढीको समस्याका बारेमा अन्तत्र्रिmया गरेको थियो ।
यस्तै रातो नदीको सम्भावित बाढीका बारेमा जनकपुरको जलेश्वरर भारतको भिट्टामोर बजारमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । यस्तै बाराको लखनदेही नदी, लालबकैया नदी, बागमती नदीको बाढीले नेपाल भारततर्फ पु¥याउने असरको बारेमा अध्ययन गरेको उपसचिव गुप्ताले जानकारी दिए । अध्ययनबाट प्राप्त समस्यालाई दुई देशबीच आदान प्रदान भएको छ । यसलाई माथिल्लो निकायबाट समाधानको पहल गरिने भएको छ ।
नेपाल भारतबीच सीमाक्षेत्रम हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न तीस चालीस वर्षदेखि पहल भए पनि बल्ल यो मुद्दाले मूर्तता पाएको उनले बताए । भारतीय पक्षबाट भएको समस्या समाधान गर्न उनीहरू सकारात्मक भएको गुप्ताले बताए ।
पर्सादेखि पश्चिमतर्फका जोखिमयुक्त क्षेत्रको साउन मसान्ततिर अध्ययन गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।